Tsipy kanetibe – Famaranana: mahafeno ny fepetra ny kianja Pétanque Ampitatafika Club | NewsMada
Tsipy kanetibe – Famaranana: mahafeno ny fepetra ny kianja Pétanque Ampitatafika Club
Nahafa-po ny mpilalao ny kianjan’ny PAC, nandritra ny dingana faharoa ny fifanintsanana amin’ny fifaninanam-pirenena, taranja tsipy kanetibe, sokajy “mixte”, ny faran’ny herinandro teo. Nanamafy izany ihany koa ny filohan’ny PAC, no sady nampanantena fa tsy maintsy vitaina mialohan’ny lalao famaranana ny fanitarana ny kianja.
Araka ny efa notaterina teto, hotontosaina ny 9 sy ny 10 marsa izao ny famaranana lehibe hiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, sokajy “mixte”, taranja tsipy kanetibe. Kianja telo ny ao anatin’ny safidy handraisana ity fifaninanana ity, hatreto. Anisan’izany ny Pétanque Ampitatafika Club (PAC). Kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izy ity, raha ny hita nandritra ny dingana faharoan’ny fifanintsanana amin’ity fifaninanam-pirenena ity, ny faran’ny herinandro teo. Ao anatin’ny fotoam-pahavatra rahateo amin’izao ny eto an-dRenivohitra ka vao mainka mamaly ny filàn’ny mpilalao ny kianjan’ny PAC satria sady misy tafo no afaka mandray lalao maromaro, ao anatin’ny fotoana iray, araka ny fanazavana nentin’ny filohan’ny PAC, Rakotoson Zo. Etsy ankilany, “tombony lehibe ho an’ny klioba eny an-toerana ihany koa ny fandraisana ity famaranana lehibe ity satria tsy voatery handeha lavitra ireo mpilalao eo anivon’ny klioba”, hoy hatrany ny fanazavana. Tsiahivina fa mahatratra 50 mahery eo amin’izao ireo mpikambana eo anivon’ny PAC, miangaly ity taranja tsipy kanetibe ity, efa manomboka mahazo vokatra tsara hatrany izy ireo hatramin’izay nahavitan’ny kianja vaovao ity izay. Raha ny nambaran’ireo mpifaninana ao anatin’izao fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja tsipy kanetibe, izao, mahafa-po azy ireo tokoa ity kianja vaovao eny Ampitatafika ity, na dia eo aza ny halavirana sy ny fisian’ny fitohanan’ny fiara. Azo lazaina ho mahafeno ny fepetra amin’ny fampiantranoana lalao goavana toy izao ny kianjan’ny PAC, raha ny nambaran’ireo mpilalao. Marihina fa efa notokanana ny 16 jona 2018 lasa teo ity kianja filalaovana tsipy kanetibe ity.
Ankoatra ny kianja natokana ho an’ny taranja tsipy kanetibe, mbola maro ny fotodrafitrasa kasaina hatsangana eo amin’io toerana io, raha ny fanazavan’andriamatoa Rakotoson Zo hatrany. Anisan’izany ny fananganana kianja ho an’ny baolina kitra, lalaovin’olona 11. “Tetikasa hiarahana miasa amin’ny mpiara-miombona antoka maro ity kianja kasaina hajoro ity ary efa hanomboka tsy ho ela”, hoy hatrany ny fanazavana.